Mayelana NATHI - Hebei Weaver Textile Co., Ltd.
Sizibophezele ekusetshenzisweni kwendwangu nasekuthengiseni.
Isungulwe kusukela ngo-1996. Imikhiqizo yethu eyinhloko yizinhlobo ezahlukene zama-caps nama-yarns.With ngokunwetshwa kwebhizinisi, sisungule amafektri amathathu wesigqoko namafektri amathathu entambo.
Le nkampani isebenzisa amasistimu wokuklama athuthukile kanye nokusetshenziswa kokuphathwa kohlelo lwe-ISO9002 2000 oluphambili emhlabeni jikelele.
Manje imishini yethu yonke isezingeni eliphakeme eliphakeme.Ngezindlela eziningana zokubambisana, imikhiqizo yethu ithunyelwa emazweni amaningi nakwamanye amazwe, njenge: United States, Canada, Spain, Turkey, United Kingdom, Netherlands, Finland, Australia, South I-Afrika, iSouth Korea, i-United Arab Emirates, iVietnam, iBrazil, iMalaysia, iNdiya, iThailand, iMorocco, iBangladesh, iGuatemala, iTopiya. Manje amafektri ethu asungule ubudlelwano obuhle besikhathi eside bokubambisana nabanye abadayisi bakwamanye amazwe.
Sithuthukise izinhlobo ezahlukahlukene zemikhiqizo esezidlulile izindinganiso zohlelo lokuphathwa kwekhwalithi le-ISO9002 2000.
Siyinkampani ezinikele ekusunguleni ukubambisana kwesikhathi eside namakhasimende omhlaba jikelele.
Umgomo wethu ukuthi ube ngumthombo wakho oyinhloko wezigqoko ezahlukahlukene zendwangu, imicu yokuthunga i-polyester, imicu yokuthunga umucu oyinhloko nezigqoko zamaloli.
Sisebenzise izindinganiso eziqinile zokulawula ikhwalithi ukuqinisekisa ukuthi amakhasimende ethu eNyakatho Melika naseYurophu angathola imikhiqizo esezingeni eliphakeme emakethe yomhlaba eshintsha ngokushesha.
Sibheke phambili ekusebenzeni nabangane bebhizinisi basekhaya nabangaphandle futhi sakhe ikusasa elingcono!